किन विथोलिन्छ निद्रा ? – MEDIA DARPAN
अहिले धेरैको निद्रा विथोलिएको छ । निद्राका लागि अनेक उपाय गर्नुपरेको छ । कति त निद्राको चक्की नखाई सुत्नै नसक्ने अवस्थामा पनि छन् ।
निद्रा किन विथोलिदैछ ? यसमा एकमात्र जवाफ छैन । कसैलाई रोगले, कसैलाई वेचैनीले, कसैलाई महत्वकांक्षाले, कसैलाई निरासाले, कसैलाई चिन्ताले निदाउन दिएको छैन । आखिर ननिदाउँदा के हुन्छ ?
निद्रा शरीरको लागि एक अपरिहार्य र अनिवार्य आवश्यक्ता हो । दिनभर सक्रिय एवं चलयामान शरीरलाई विश्राम चाहिन्छ । जसरी हामीलाई बाँच्नका लागि पानी, हावा, खाना चाहिन्छ । उसैगरी निद्रा पनि । तर, कस्तो निद्रा ?
व्यस्त जिवनशैलीका बाबजुद मानिसहरुले आˆनो खानपान तथा एक्सरसाइजमा विशेष ध्यान दिन्छन् । जबकी निद्रामा भने कटौती गर्छन् । जबकी तन र मनलाई स्वस्थ राख्नका लागि पनि पौष्टिक आहारको साथमा पर्याप्त निद्रा जरुरी छ । किनकी निद्राको कमी भएमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह जस्ता गम्भीर समस्या निम्तिने गर्छ ।
हालैमा अमेरिकास्थित ड्यूक विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरुले गरेको एक अध्ययन अनुसार नियमित सात घण्टा नसुत्ने व्यक्तिमा उच्च रक्तचाप तथा रगतमा चिनीको मात्रा बढ्ने गर्छ । यसबाट बच्नका लागि पनि दैनिक आठ घण्टा सुत्न जरुरी छ ।
चिकित्सकहरुका अनुसार निद्राको क्रममा उच्च रक्तचाप तथा सुगरलाई नियन्त्रित गर्ने हर्मोनको स्राव हुने गर्छ । जबकी निद्राको कमी भएमा यस्ता हर्मोनको सन्तुलन विगि्रएर उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह जस्ता समस्या निम्तिने गर्छ ।
क्यानाडास्थित सेन्ट माइकल हस्पिटल र टोरन्टो विश्वविद्यालयका शोधकर्ताले हालसम्म गरेको एक सय ५५ अध्ययनको विश्लेषण गरी यो निर्णयमा पुगे की फलफूल तथा साजसब्जीमा रहेको प्राकृतिक चिनी शरीरमा पुग्नासाथ शक्तिमा परिणत हुन्छ । त्यसैले, यस्ता फलफूल तथा सागसब्जीको सेवनले मधुमेहको जोखिम बढ्दैन । तर बजारमा विक्रीवितरण हुने जुस, दूध लगायतका चिसो पेय पदार्थमा रहेको कृत्रिम गुलियोपनाले टाइप-२ मधुमेहको कारण बन्न सक्छ । त्यसैले, यस्ता समस्याबाट बच्न पनि गुलियो पेय पदार्थबाट दुरी कायम राख्न जरुरी छ । बरु ताजा फलफूलको सेवन गर्न सकिन्छ ।
युट्युबको प्रभावले पृथ्वी थेप्चो बन्दै